‘द कश्मीर फाइल्स’ सफल हुनुको कारण के हो ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper‘द कश्मीर फाइल्स’ सफल हुनुको कारण के हो ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
‘द कश्मीर फाइल्स’ सफल हुनुको कारण के हो ?
निर्देशक विवेक अग्नीहोत्रीको फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ले दुई सय करोड कमाईको आँकडा पार गरेको छ । यो फिल्मले १३ दिनमै यति धेरै व्यापार गर्छ भन्ने कुरा कसैले सोचेका पनि थिएनन् । न त फिल्म निर्माता, कलाकार तथा दर्शकलाई नै थियो ।
पहिलो दिन बक्सअफिसमा ३ दशमलब ५ करोड कमाउने फिल्मले सय करोड पूरा गर्छ भन्ने कल्पना कसैको पनि थिएन । तर फिल्मले त्यो देखाएरै छोड्यो । १५ करोड बजेटमा बनेको यो फिल्मले ठूलाठूला फिल्मलाई बक्सअफिसमा पानी पिउन बाध्य बनाइदियो । यो फिल्मको सुरुवाती समयदेखि अहिलेसम्मको यात्रालाई हेर्ने हो भने पाँच कारणले बक्सअफिसमा सफल भयो भन्ने मान्न सकिन्छ ।
दर्शक तान्ने चाबी बलिउडले कसरी पत्ता लगायो ?
याे साता बलिउडमा :- मार्लिनकाे तस्वीर २०० मिलियन डलर देखि ‘द कश्मीर फाइल्स’ २०० सय करोड सम्म
‘आरआरआर’ चलचित्रको भित्री पाटो